Barcelona oo Janaayo dooneysa inay soo xero geliso kabtanka Man United Nemanja Vidic. - Caasimada Online
Home Warar Barcelona oo Janaayo dooneysa inay soo xero geliso kabtanka Man United Nemanja...
Barcelona oo Janaayo dooneysa inay soo xero geliso kabtanka Man United Nemanja Vidic.
Sida aan kasoo xiganay wargeyska kasoo baxa dalka Talyaaniga ee CalcioMercato, Barcelona ayaa rajo weyn ka qabta inay Janaayo soo dhaqaajiso daafaca dambe ee kooxda Manchester United Nemanja Vidic. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia waana shaawac qaba waxaana la filayaa inuu garoomada kusoo laabto ka hor sanada cusub. Tababaraha Barcelona Tito Vilanova ayaana doonaya inuu Old Trafford kasoo kexeeyo daafacaan.
Iyadoo ay Chris Smalling iyo Phil Jones garoomada kusoo laabteen Rio Ferdinand iyo Jonny Evans ayaa u muuqday kuwo booska daafaca adkeeyey xilli ciyaareedkaan, Man United ayaanse qarsan Karin dhibaatada daafaca dhexe, Ferguson ayaana laga yaabaa inuusan iibin daafaciisa maadaama uu baahi u qabo.
Barcelona ayaa hugaanka u heysa La Liga inkastoo ay si fiican ku bilowdeen xilli ciyaareedka hadana waxaa kooxda Comp Nou ka muuqday dhibaato daacaf la’aaneed marka loo eego dhaawacyada Carles Puyol iyo Gerard Pique, Javier Mascherano ayaana booskaas bedelay halka uu Vilanova. Marba qorshe ku dhiso daafaciisa habacsan.
Barcelona ayaa sidoo kale xakameyn weysan goolasha laga dhaliyaano iyadoo 12 jeer shabaqeeda lasoo taabtay 4 ka mid ah waxaa ka dhalisay kooxda Deportivo La Coruna. Waxayna dooneysaa inay isku dhisto kabtanka Red Devils Vidic.